Ithuba lokuThengisa eliMangalisayo eliza ne-IoT | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 7, 2018 Lwesine, ngoFebruwari 25, 2021 Douglas Karr
Kwiveki okanye edlulileyo ndacelwa ukuba ndithethe kumsitho wengingqi kwi Internet Yezinto. Njengombambisi weqela I-Dell Luminaries podcastNdinetoni yokuchazwa kwikhompyuter ye-Edge kunye nezinto ezintsha zobuchwepheshe esele zithathe indawo. Nangona kunjalo, ukuba wenza uphando nge amathuba okuthengisa ngokubhekisele kwi-IoT, akukho nyani ingxoxo eninzi kwi-Intanethi. Ngapha koko, ndidanile kuba i-IoT iya kuguqula ubudlelwane phakathi komthengi kunye neshishini.
Kutheni le nto i-IoT iguqula?
Kukho izinto ezininzi ezintsha eziza kwinyani eziya kuguqula i-IoT:
I-5G engenazingcingo iya kwenza isantya se-bandwidth esiya kuthi Ukuphelisa uqhagamshelo olunentambo ngaphakathi kwishishini nakwishishini. Uvavanyo lufezekisile isantya ngaphezulu kwe-1Ii-Gbit / s kumgama ukuya kwiikhilomitha ezi-2.
I-Miniaturization Izinto zekhompyuter ezinamandla ongezelelweyo ekhompyuter ziya kwenza ukuba izixhobo ze-IoT zikrelekrele ngaphandle kwesidingo sombane ogqithisileyo. Iikhompyuter ezincinci kune penny zinokuqhuba ngokungapheliyo ngamandla elanga kunye / okanye ukutshaja ngaphandle kwamacingo.
ukhuseleko Inkqubela phambili ibethelelwa ngaphakathi kwezixhobo kunokuba ishiywe kubathengi nakumashishini ukuze baziqonde.
The iindleko ze-IoT izixhobo zizenza zingabizi. Kwaye inkqubela phambili kwisekethe eprintiweyo iya kwenza ukuba iinkampani ziyile kwaye zenze izinto zazo ze-IoT-zenza ukuba zisetyenziswe naphina. Nokuba iiprinta ze-OLED eziguquguqukayo zibonisa ukuba zijikeleze ikona-zibonelela ngeendlela zokubonisa imiyalezo naphina.
Ke Olu luThengiso luza kuba njani?
Cinga ngendlela abathengi abazifumene ngayo baphanda ngayo iimveliso kunye neenkonzo ezibonelelwa ngamashishini kule minyaka ilikhulu idlulileyo.
Intengiso Kwinkulungwane eyadlulayo, umthengi wafunda kuphela ngemveliso okanye ngenkonzo ngokuthe ngqo kumntu okanye kwishishini eliyithengisayo. Ukuthengisa (kwathiwa igama) yayikukuthengisa kwabo kwi imarike.
Imidiya ehanjisiweyo -Njengokuba imithombo yeendaba ifumaneka, njengomatshini wokushicilela, amashishini ngoku ebenethuba lokuthengisa ngaphandle kwelizwi labo-kuluntu lwabo nakwezinye iindawo.
Imidiya enkulu -Imithombo yeendaba enkulu yavela, ngoku inika amashishini amandla okufikelela amawaka okanye kwizigidi zabantu. Imeyile ngqo, umabonwakude, unomathotholo… nabani na ophetheyo unokuyalela iidola ezibalulekileyo ukufikelela kwabo baphulaphuli. Kwakusemthethweni, ishishini lentengiso lakhula laba lukhulu kakhulu kunye neenzuzo. Ukuba amashishini anqwenela ukukhula, kwakufuneka basebenze ngeendlela ezihlawulelwayo zabathengisi.
Digital Media -I-Intanethi kunye nemithombo yeendaba kwezentlalo zibonelela ngethuba elitsha elitshintsha imithombo yeendaba. Iinkampani ngoku zinokusebenza kwilizwi lokuthengisa ngomlomo ngokukhangela kunye neendlela zentlalo ukwakha ulwazi kunye nokunxibelelana nabantu ekujoliswe kubo. Ewe kunjalo, uGoogle noFacebook bathathe ithuba lokwakha amasango enzuzo alandelayo phakathi kweshishini kunye nomthengi.
Ixesha elitsha lokuThengisa: IoT
Ixesha elitsha lokuthengisa lisondele kuthi elinomdla ngakumbi kunayo nantoni na esele siyibonile. I-Io iya kubonelela ngamathuba amangalisayo esingazange sawabona ngaphambili-ithuba lokuba amashishini agqithe onke amasango kwaye anxibelelane, kwakhona, ngokuthe ngqo kunye nethemba kunye nabathengi.
Ngaphakathi kwintetho, umhlobo olungileyo kunye Ingcali ye-IoT uJohn McDonald inikezele ngombono omangalisayo wekamva lethu elikufutshane. Uchaze iimoto zanamhlanje kunye namandla amakhulu ekhompyuter asele enawo. Ukuba yenziwe, iimoto zinokunxibelelana ngoku nabanini bazo, zibazise ukuba ziyaluka kwaye zidiniwe. Iimoto zingakuxelela ukuba uthathe indlela elandelayo kwaye zikukhombise kwi Starbucks ekufutshane… ude u-odole isiselo osithandayo.
Masithathe inyathelo eliya phambili. Ungathini ukuba, endaweni yoko, i-Starbucks inike imagi yokuhamba ngetekhnoloji ye-IoT enxibelelana ngqo nemoto yakho, indawo ekubekwe kuyo jikelele, izivamvo zayo, kunye nemug yokuhamba ikwazise ukuba isiselo sakho si-odolwe kwaye uphume kwindawo elandelayo. Ngoku, i-Starbucks ayixhomekekanga kwisango lokuhlawula kunye nokunxibelelana nomthengi, banokunxibelelana ngqo nomthengi.
IoT iya kuba kuyo yonke indawo, kuyo yonke into
Sele sibonile apho iinkampani zeinshurensi zibonelela ngezaphulelo ukuba ubeka isixhobo emotweni yakho esazisa iipateni zakho zokuqhuba kwinkampani. Makhe sihlolisise amanye amathuba:
Isixhobo sakho se-inshurensi yemoto sithetha ngendlela efanelekileyo yokuqhuba ngokusekwe kwimikhwa yakho yokuqhuba, iindawo ukunqanda iingozi, okanye iindlela eziphambeneyo zokukugcina ukhuselekile.
Iibhokisi zakho zeAmazon zinezixhobo ze-IoT ezinxibelelana ngqo nawe ukubonisa indawo yazo ukuze ukwazi ukudibana nazo apho zikhona.
Inkampani yakho yenkonzo yasekhaya ifaka izixhobo ze-IoT ekhayeni lakho ngaphandle kwendleko efumana izaqhwithi, ukufuma, okanye kwanezitshabalalisi- ikunika isibonelelo sokufumana inkonzo kwangoko. Mhlawumbi bade bakunike nesithembiso sokubhekisa abamelwane bakho.
Isikolo somntwana wakho sikunika ukufikelela kwi-IoT kwigumbi lokufundela ukuze uhlaziye indlela yokuziphatha komntwana wakho, imiceli mngeni okanye amabhaso. Unokwazi nokuba unxibelelane ngqo nabo kwimeko engxamisekileyo.
Umenzeli wakho wokuthengisa izindlu nomhlaba ushumeka izixhobo ze-IoT kwikhaya lakho lonke ukubonelela ngokhenketho olubonakalayo nolukude, okwaziyo ukudibana, ukubulisa, nokuphendula imibuzo kubathengi abanokubakho nangaliphi na ixesha emini okanye ebusuku xa kufanelekile kuwo omabini amaqela. Ezo zixhobo zikhubaza ngokuzenzekelayo xa usekhaya kwaye unika imvume kwishedyuli yakho.
Umboneleli wakho wokhathalelo lwempilo uhambisa iimvakalelo zangaphakathi okanye zangaphandle ozinxibayo okanye zokwetyisa ezibonelela ngedatha ebalulekileyo ukubuyela kugqirha. Oku kukuvumela ukuba uziphephe ngokupheleleyo izibhedlele, apho kukho umngcipheko wosulelo okanye ukugula.
Ifama yakho yendawo ibonelela ngezixhobo ze-IoT ezinxibelelana ngemicimbi yokhuseleko lokutya okanye ukuhambisa inyama, imifuno, kunye nokuvelisa ngokufanelekileyo ngexesha elifanelekileyo kunye nawe. Abalimi banokwandisa iindlela zokuqikelela ukusetyenziswa ngaphandle kokuba bathengise kwii-megastores zokutya ngexabiso eliphantsi. Amafama ayaphumelela kwaye abantu bayagcina ekusetyenzisweni ngokungeyomfuneko kweoyile yokuhanjiswa kunye nokusasazwa.
Eyona nto ibaluleke kakhulu, abathengi baya kuba nolawulo kwidatha yethu kwaye ngubani onokuyifumana, ukuba bangafikelela njani kuyo, kwaye banakho ukufikelela kuyo nini. Abathengi baya kurhweba ngovuyo ngedatha xa besazi ukuba idatha ibonelela ngexabiso kubo kwaye iphathwe ngokufanelekileyo. Nge-IoT, amashishini angakha ubudlelwane obuthembekileyo nomthengi apho ayaziyo ukuba idatha yabo ayizukuthengiswa. Kwaye iinkqubo ngokwazo ziya kuqinisekisa ukuba idatha igcinwa ikhuselekile kwaye ikhuselekile. Abathengi baya kufuna zombini unxibelelwano kunye nokuthobela.
Ke, uthini malunga neshishini lakho- ungabutshintsha njani ubudlelwane bakho kunye nethemba kunye nabathengi ukuba unonxibelelwano ngqo kwaye unokunxibelelana ngqo nabo? Kungcono uqale ukucinga ngayo namhlanje… okanye inkampani yakho ayinakukwazi ukukhuphisana kwixa elizayo.
tags: 5gxeshayasebukhosi-Unxibelelwano lokuthengisa